Ny fampihenana ny kibo dia iray amin'ireo mari-pamantarana momba ny fiterahana. Ao amin'ny vehivavy samihafa, ny vanim-potoan'ny fotoana hijanonan'ny kibo alohan'ny fandefasana dia mety ho hafa tanteraka. Izany dia miankina amin'ny toetran'ny olona tsirairay sy ny antony hafa.
Ny fotoana famenoana ny kibo alohan'ny fiterahana
Mba hamaliana bebe kokoa ny fanontaniana, rehefa averina alohan'ny fandefasana ilay kibo dia tokony ho fantatra ny fampahalalana manaraka:
Amin'ny vehivavy miteraka izay vao voalohany, ny kibo matetika dia mitroka 2-4 herinandro alohan'ny fiterahana - indrindra amin'ny 36-38 herinandro;
Ny vehivavy mitaiza dia afaka manamarika ny fihenan'ny kibony avy hatrany alohan'ny fiterahana na andro vitsivitsy mialoha azy ireo.
Na izany aza, ny vehivavy iray izay efa ho lasa reny vao voalohany dia tsy tokony hanahy raha tsy latsaka 38 herinandro ny vavony. Tsy lazaina velively ny fiovam-po. Amin'ny vehivavy maro be, ny lava dia lavo 5-7 andro alohan'ny fiterahana. Azo atao ary ny safidy fa tsy mahatsikaritra tsotra izao ny tsy fahampian'ny vehivavy iray, satria ny bikany dia mitovy amin'ny fiterahana, fa tsy ny rehetra no mahalala.
Ny fahatsapana rehefa nidina ny kibony
Rehefa misy fotoana vitsy sisa mialohan'ny entana, dia miezaka ny hibodo toerana tsara ao an-dohasaha ny zaza. Miankina amin'ny famelabelarana izay misy ny foetus - ny loha na ny tongony midina, midina any amin'ny faritra ambany amin'ny kelikely izy ary mijanona ao amin'io toerana io mandra-pahateraka. Noho izany dia tsy mamoaka ny diapragma sy ny tonon-kibo manala baraka ny mpampiasa, izay mitondra fanampiana amin'ny vehivavy bevohoka. Azontsika atao ny manavaka ireto fihetseham-po mahafinaritra ireto izay mipetraka rehefa miongana ny vavony mialohan'ny fahaterahana:
Mora kokoa ny miaina, mihena ny fofonaina, ary mamela fihetseham-po henjana ao an-tampon'ny vatana;
Noho ny famoahana ny vavony amin'ny fisakanana, ny fiterahana sy ny tsy fahampiana dia nanjavona, vehivavy tena tezitra tamin'ny fahatelo fahatelon'ny vehivavy bevohoka.
Ankoatra ny fiovana mahafinaritra dia mila miomana ny maman-dreny noho ny tsy fahampian'ny fahatsapana izay miaraka amin'ny fihenan'ny kibo alohan'ny fiterahana:
Hatramin'ny nidiran'ny zaza tao amin'ny faritra ambany indrindra amin'ny tranonjaza ary miparitaka eo amin'ny blaogera sy ny fitsitsiana, misy faniriana matetika mankany amin'ny efitra fandroana, indrindra amin'ny alina;
Maro ny vehivavy no manamarika fa alohan'ny famoahana ny vavony - misy fohy, fa matetika mampihetsi-po ao amin'ny kibo ambany sy ambany miverina;
ny ivon'ny herintoditra dia mihetsika avy any an-tampon'ny kibon'ny ambany ary sarotra be ny maka aina tsara, izay mahatonga ny vehivavy sasany hiaina ny torimaso torimaso;
Ny fanentanana ny fanaintainana sy ny fanerena amin'ny faritra voankazo dia afaka mijoro ho vavolombelona amin'ny fanomanana ny lakandrano mba hikolokolo ny asa, ary mety haharary ny fahatsapana;
Misy ny fihazakazakazakazakazakazaka tsy dia misy dikany, sarotra ny mandeha an-tongotra, ary mipetraka tsy mahazo aina noho ny fanerena eo amin'ny faritra ambany amin'ny tohodrano;
Ny tonon-koditra dia ao anaty tono, noho izany dia misy ny fahatsapana ny kibo "vato" - fahatsapana hafanam-po matetika eo am-piterahana.
Vehivavy maro no manahy momba ny vavony mafy, fa ara-dalàna aloha izany vao teraka. Ary koa, ny toe-javatra efa mahazatra, mampiseho ny lalana marina marina, raha mialoha ny famindrana dia manintona ny kibo ambany. Ny vatana no manomana ny fahaterahan'ny zaza iray, ary ny fisehoana toetra rehetra dia fitsipika.
Ny mari-pamantarana azo antoka ny famenoana ny kibo dia ny manala ny foitra - tsy mitsahatra mibitsibona eo ambonin'ny ety, fa lasa manja sy tsy hita maso. Ny dokotera dia milaza fa alohan'ny fiterahana dia mitombo kely ny vavony, saingy matetika ireo reny manan-talenta izay efa nanan-janaka no nahamarika izany.
Tsara ho marihina fa amin'ny marika maneho fihenam-bidy ny kibo dia aza mandeha any amin'ny hopitaly. Azo inoana fa mbola misy fotoana hanaovana ireo fiomanana rehetra ilaina ary miandry amim-pitandremana ireo mpialoha lalana akaiky kokoa ny génére efa misy.
Ny fahanterana 28 herinandro - fivoaran'ny foetus
Toxicose amin'ny fitondrana vohoka - inona no tokony hatao?
Fitondrana jadona nandritra ny fitondrana vohoka
Famaranana ny fivoaran'ny foetus
Patties voankazo amin'ny kefir
Kendall Jenner dia tonga zazavavy iray tao anaty afo ho an'ny gazety "Love"
Kitapo ho an'ny asa ivelany
Photoshoot amin'ny zazavavy eo amoron-dranomasina
Manana nify ratsy ilay zaza
Fanamboarana ny rindrin'ny penoplex
Akory trondro trondro
Gresy - andro isam-bolana
Wedding hairstyles 2018 - 58 sary amin'ny safidy tsara indrindra ho an'ny mpivady
Marinady miaraka amin'ny vinaingitra ho an'ny kebab shish
Manick amin'ny hevitra marobe - mahaliana sy tsotra ho an'ny sakafo matsiro mahavelona
Chatterbox avy amin'ny alèjy
Mametaka colibacin amin'ny zaza
Andorra - fialantsasatra
Aza mihinana izany intsony: 10 entana izay mahatonga anao hanimbolo ratsy